Firenena ratsy indrindra any Hawaii any Etazonia ho an'ny trano fandraisam-bahiny
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao farany momba ny Hawaii » Firenena ratsy indrindra any Hawaii any Etazonia ho an'ny trano fandraisam-bahiny
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Kolontsaina • Vaovao farany momba ny Hawaii • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao • tompon'andraikitra • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Ny isan'ny fananana saka-biby dia azo miovaova arakaraka ny toerana, ka mahatonga ny faritra sasany amin'ny firenena ho mora azon'ny tompona biby kokoa noho ny hafa.
Miovaova arakaraka ny fanjakana sy ny isan-karazany ny isan'ireo trano ankafizin'ny biby.
I Illinois, Mississippi ary New York no fanjakana be fitiavana indrindra amin'ny biby.
Hawaii, Alaska ary Virginia Andrefana no fanjakana amerikana tsy tia biby indrindra.
67% amin'ireo tokantrano amerikana (fianakaviana manodidina ny 85 tapitrisa) no manana biby fiompy ary trano 43 tapitrisa no onenan'ireo mpanofa. Ahoana ary raha mila mifindra toerana amin'ilay namanao volo ianao?
Miaraka amin'izany ao an-tsaina, ny manam-pahaizana momba ny dia dia te hahalala hoe iza ny fanjakana, tanàna ary tanàna manana ny ampahany betsaka amin'ny trano misy manofa izay manaiky biby fiompy ihany koa.
Mijery ireo dimampolo be mponina indrindra US tanàn-dehibe, ny manam-pahaizana dia nandrakitra ny haben'ny fananana azo hofaina izay manaiky biby fiompy ihany koa. Ho fanampin'izany, hitanay ny isan-jaton'ny hofan-trano misy isaky ny fanjakana izay hanaiky mpanofa trano miaraka amin'ny biby fiompy, hanambara ny toerana tsara indrindra eto amin'ny firenena honenan'ireo tompona biby.
I Illinois no fanjakana tsara indrindra eto amin'ny firenena ho an'ireo tompona biby mitady hanofa, miaraka amin'ireo fananana 59.87% mandray biby fiompy. Ka raha tompona biby fiompy mitady hifindra any amin'ny faritra vaovao ianao, dia mety ho filokana ho anao i Illinois!
Ny fanjakana farany tsara indrindra amin'ny fanofana biby fiompy dia ny Mississippi, miaraka amin'ny 52.28% avela ho azon'ny tompona biby. Izany no mahatonga an'i Mississippi ho mpinamana indrindra amin'ny fanjakana atsimo rehetra, ary toerana mety hipetrahan'ny tompona biby.
New York no fanjakana tsara indrindra fahatelo amin'ny firenena amin'ny fanofana trano ho an'ny biby fiompy, miaraka amin'ny fananana 47.89% mamela ny mpanofa hitondra ny biby fiompy. Ity isan-jato avo lenta ity dia mahatonga an'i New York ho fanjakana tsara indrindra any amin'ny morontsiraka atsinanana amin'ny fiainana miaraka amin'ireo biby fiompinao.
Fanjakana 10 tsara indrindra ho an'ny hofan-trano ho an'ny biby
laharana State Mamelombelona ny biby Avelao tanteraka % Sariaka amin'ny biby